Muxuu Maxamed Salaax ka yiri Bisha Ramadaan ee maanta Koow ah???? – Gool FM
Muxuu Maxamed Salaax ka yiri Bisha Ramadaan ee maanta Koow ah????
(England) 17 Maajo 2018. Waxaa maanta Koow ah Bisha Barakeysan ee Ramadaan iyadoo ay waajib ku tahay inuu Soomo qofkasta oo Muslim ah, caqli leh oona qaan gaar ah haddii aysan jirin sababo kale oo ka reebaya sida xunuun, safar iyo wixii la mid ah.
Laacibka ugu fiican Premier League ee Maxamed Saalax ayaa aad loo hadal hayaa inuu Sooman yahay iyo in kale.
Ma jiraan warar rasmi oo xaqiijinaya inuu Sooman yahay wiilka reer Masar balse Hadalka uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka iyo faraciisa dambe ayaa kuu sheegi kara inuu Sooman yahay Maxamed Saalax.
25 jirka ayaa ku soo bar baaray bulsho Islaam ah oo qoyskiisa oo dhan waa Islaam, waxaana xusid mudan inuu Soomi jiray xitaa markii uu joogay kooxda Chelsea.
كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم ربنا يعيده علينا بالخير والسعادة علينا جميعًا…
Maxamed ayaa bartiisa Twitter ku soo qoray: “Sanad walba iyo adinka oo wanaagsan, Ramadan Kariim, Rabbi ha nooga dhigo mid kheyr iyo farxad leh dhamaanteen”.
GoolFM.net ayaa il gaar ah ku heyn doonta sheekada Maxamed Saalax iyo Ramadaanka, wax kasta oo ka soo kordha waan idinla wadaagi doonaa insha’alaah, waxaana xiddiga Muslimka ah u rajeynaynaa inuu Soonka ilaah waafajiyo.
Chelsea oo Dharbaaxo Kala Kulmeysa Macalinka u Badali lahaa Conte
Buffon oo waxyaabo badan uga hadlay shirkii jaraa'id ee uu qabtay